အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: Chatham House 2011 ဆုကို လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားရွေးချယ်
Chatham House 2011 ဆုကို လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားရွေးချယ်
ဒီဆုကို မနှစ်က တူရကီ သမ္မတကို ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:49 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အာဇာနည်နေ့ ဒို့မမေ့ (63) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့၊အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုဂုဏ်ပြုပါ၏
(63) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အောင်ဆန်းဇာနည် ဖေဖေါ်ဝါရီ ဆယ့်သုံး မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ၊ တစ်ထောင့်ကိုးရာတစ်ဆယ့်ငါး ရှေ့နေ ဦးဖာသား၊ ဇာတိ...
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ယဉ်ကျေးသောလူမျိုးတိုင်း နှစ်ဟောင်းကုန်၍ နှစ်သစ်ကူး သည်ကို အလေးအမြတ်ထားကြသည်။ မိမိတို့ ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလေ့ ထုံးစံ အလိုက် နှစ...
ကိုဇာဂနာရဲ့ ဖခင် ဦးအောင်သိန်း(ခေါ်) ကဗျာဆရာကြီး နန်းညွန့်ဆွေ ဈာပနအခမ်းအနား သတင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း..
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လွမ်းသူ့ပန်းခြင်း အကျဉ်းထောင်တွင်းမှာ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ သားဖြစ်သူ ကိုဇာဂနာရဲ့ လွမ်းသူ့ပန်းခြင်း အမ...
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရဦးတင်ဦး၏ စစ်မှုထမ်းဘ၀ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွေ့အကြုံများ (အပိုင်း - ၁)
ဗီအိုအေ ။ ။ ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၂၈ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ရဲ့ နာယက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် ကာကွယ်ရေး ဦ...